laacibfm.com » Arsenal Oo Kulan Waali Ah Oo SHAN Gool La Iska Dhaliyay Ku Garaacday Everton, Aubameyang Oo Labo Gool Dhaliyay & Arteta Oo Garaacay Ancelotti
Arsenal ayaa gaartay guushii labaad ee isku xigta ee horyaalka Premier League ka dib markii ay kulan waali ah oo la iska dhaliyay shan gool ay 3-2 kaga badiyeen kooxda tababare Carlo Ancelotti ee Everton.
Gunners oo haatan soo gashay kaalinta 9aad islamarkaana todoba dhibcood u jirta kaalinta afaraad oo ay Chelsea ku jirta ayaa hogaanka looga hormaray ka dib gool looga naxsaday daqiiqadii 1aad.
Laakiin waxaa ciyaarta ku soo celiyay Nketiah iyo Aubameyang ka hor inta uusan Everton u barbareynin Richarlison iyadoo Aubameyang uu goolka guusha u saxiixay bilowgii qeybta labaad.
Everton ayay ku qaadatay kaliya daqiiqad inay la wareegto hogaanka ciyaarta markii laad xor ah oo uu soo qaaday Sigurdsson uu soo dhex dhigay xerada ganaaxa, waxaa si xun madaxeeyay David Luiz taasoo u ogolaaday Calvert -Lewin inuu qalaama rogaal ku dhaliyo, waa goolkiisii todobaad ee sagaalkii kulan ee ugu danbeysay ee uu ciyaaray Premier League.
Waana markii labaad taariikhda Premier League ee Arsenal laga dhaliyo gool sidaan u dhakhso badan.
Daqiiqadii 18aad Arsenal waxaa ka dhaawacmay Kolasinac taasoo keentay in lagu qasbo bedel xilli hore, waxaana bedelay Bukayo Saka oo kursiga keydka la dhigay kulankaan.
Lugama qasaarin soo gelintii Bukayo Saka isagoo kubad karoos fiican ka soo dhigay garabka bidix daqiiqadii 27aad, waxaana shabaqa ku taabtay weeraryahanka da’da yar Nketiah.
Arsenal ayaa markii ay heshay goolka barbaraha ka dib waxay dhanka kale u rogtay ciyaarta iyagoo durbadiiba bilaabay inay raadiyaan goolkii ay ku qaban lahaayeen hogaanka ciyaarta.
Waxayna heleen daqiiqadii 33aad markii David Luiz uu kubad la soo injineeray u qaaday Aubameyang kaasoo aan qalad ka sameynin inuu shabaqa ku hubsado goolka ayaana u muuqaal ekaa sida goolashii uu dhalin jiray halyeeyga Arsenal Thierry Henry.
Shan daqiiqo oo dheeri ah ayaa lagu daray qeybtii hore ee ciyaarta iyadoo Everton ay goolka barbaraha heshay daqiiqadii afaraad ee waqtigii lagu daray ciyaarta.
Daafac xumo kale ayay soo bandhigeen Arsenal ka dib koorno uu soo qaaday Lieghton Baines, markii hore waa ay iska bixisay Arsenal laakiin Everton ayaa ku soo celisay xerada ganaaxa, waxaa taabtay Mina ka hor inta uusan Richarlison shabaqa ku taabanin. VAR ayaa hubisay inuu qalad dhacay ka hor goolka, waana la ansixiyay goolka iyadoo lagu kala nastay barbaro 2-2 ah.
Daqiiqadii ugu horeysay qeybtii labaad ee ciyaarta Arsenal ayaa la wareegtay mar kale hogaanka ciyaarta iyadoo kulankaan uu ahaa mid waali ah oo goolasha la isku xaaqay.
Pepe ayaa karoos soo dhigay xerada ganaaxa Everton, waxaana madaxeeyay Aubameyang oo dabamariyay goolhaye Picford taasoo aheyd goolkiisii labaad ee ciyaarta.
Ciyaarta ayaa noqotay wixii markaas ka danbeeyay mid Arsenal ay ilaashananeysay goolkeeda hogaanka iyadoo Leno uu fursad weyn ka badbaadiyay Calvert-Lewin.
Laakiin Arsenal ayaa u dhawaatay daqiiqadii 87aad inay hesho goolka seddexaad markii baas uu qalday goolhaye Picford ay keentay in kubada durbadiiba loo dhigo Nkietah oo ku jiray xerada goolka, waxaana ay darbadiisa ka dhawaajisay birta goolka.
Everton ayaa iyagana waqtigii dhimashada ciyaarta sigay inay heleen goolka barbaraha laakiin Calvert-Lewin ayaa ka qasaariyay.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 3-2 oo ay Arsenal guusha ku gaartay iyadoo kooxda Gunners kaalinta 9aad iyagoo 7 dhibcood ka danbeeya kooxda kaalinta afaraad ee Chelsea.